I-Telegraph iyirhoxisa i-ICO yayo emva kokuphakamisa i-1,7 yezigidigidi | Iindaba zeGajethi
Kwixesha elidlulileyo iTelegram ibhengeze ukungena kwayo kwimakethi ye-cryptocurrency ngeGram. Ukuqala le projekthi, inkampani iphehlelele i-ICO (umnikelo wokuqala wengqekembe). Ukuza kuthi ga ngoku ibiyimpumelelo ebonakalayo ngexabiso elipheleleyo le- $ 1,7 yezigidigidi. Kodwa inkampani wenze isigqibo sokurhoxisa le ICO ngokungalindelekanga.
Kuba akukho mntu ubelindele esi sigqibo ngeTelegram, abatyali mali Kubonakala ngathi isizathu sokurhoxiswa kwale ICO kukuba inkampani inyuse imali eninzi kubatyali mali babucala abahlukeneyo. Ke akusafuneki usebenzise le ndlela yokuqokelela.
Ubuncinci yile nto bayixelayo kwimithombo eyahlukeneyo yaseMelika. Kodwa iTelegram ngokwayo ayinikanga mpendulo ukuza kuthi ga ngoku. Ke kuyakufuneka silinde ithutyana ukufumana esona sizathu sokurhoxiswa.
Kumjikelo wokuqala wengqokelela owabanjwa ngoFebruwari, Ifemi ifumene i-850 yezigidi zeedola kubatyali-mali abahlukeneyo abangama-81. Phakathi kwazo sifumana iifemu zorhwebo ezinje ngeSequoia Capital okanye iBenchmark. Ngo-Matshi umjikelo wesibini wabanjwa, nalapho bafumana izigidi ezingama-850, kule meko evela kubatyali mali abahlukeneyo abangama-94.
Ke inkampani inyuse i-1,7 yezigidigidi zeedola ukusuka kubatyali mali abahlukeneyo abali-175. Kuza kwenzeka ntoni kwimali eqokelelweyo? Kubonakala ngathi iya kusetyenziselwa iprojekthi yeTelegram evulekileyo yeNethiwekhi. Ndiyabulela kule projekthi, isicelo sokuthumela imiyalezo siza kuqhubeka nokuxhaswa ngemali kwaye kuya kwenziwa imisebenzi emitsha kuyo.
Kubonakala ngathi, Ucingo aludingi ngaphezulu kwe-1,7 yezigidigidi ukwakha kunye nokwazisa iTelegram evulekileyo yeNethiwekhi. Ngapha koko, kule minyaka mithathu izayo inkampani icwangcisa ukuchitha kuphela i-400 yezigidi zeedola. Ke ngemali abasele beyifumene banokukwazi ukuyicima le ICO.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Telegraph iyicima i-ICO yayo emva kokuphakamisa i-1,7 yezigidigidi zeedola
Ukunyamezela kwe-Samsung Pro, amakhadi e-SD aphezulu